Global Voices teny Malagasy » Manaitra amin’ny fahabetsahan’ny fahazoana angovo avy amin’ny rano ao Balkana ny mpandala tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2019 6:42 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Nikolovska Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Albania, Bolgaria, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Serbia, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Toerana bitika famokarana angovo avy amin'ny rano ao amin'ny reniranon'i Krapska Reka, ao an-tendrombohitra Jakupica, Makedonia Avaratra. Ao anatin'ny Tambajotra Emeraody  amin'ny faritry ny voary arovana izany. Saripikan'i Eko-svest , nahazoana alalana.
Manohitra ny fananganana ireo toby bitika famokarana angovo avy amin'ny rano izay lazain'ny manampahaizana manokana ho mandrahona ny tontolo iainana sy ny loharano madio ny mpikatroka manerana ny faritra Balkana Andrefana. Mihoatra ny 2700 ireo toerana bitika famokarana angovo avy amin'ny rano  izay na kasaina na eo am-panganana ao Makedonia Avaratra, Bosnia- Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, ary Kroasia amin'izao fotoana izao.
Nitodika tany amin'ireo fakana angovo avy amin'ny rano ireo firenena ao Balkana hanafainganana ny fahazoana ny tanjona napetraky ny Fifanarahan'ny Vondrom-Piarahamonina ara-Angovo , fifanarahana ifanaovan'ny Vondrona Eoropeana sy ireo mpifanila vodirindrina aminy izay tsy maintsy ataon'izay nanao sonia, mba hahatratra 27 isanjato amin'ny herijirony no avy amin'ny loharanon'angovo azo havaozina mialoha ny taona 2020.
Saingy lazain'ny mpitsikera fa mihazakazaka amin'ny fanorenana tsy manao araka ny tokony ho izy ny fanombanana ny fiantraikany ara-tontolo iainana ireo governemanta — ary feno kolikoly ny fanaovana ireo tetikasa ireo.
Fanadihadiana  iray nataon'ny Bankwatch, tambajotram-pikambanana fiarahamonina sivily avy ao Eoropa Atsinanana sy Afovoany, nitsidika firenena valo ao amin'ny faritra notohanan'ny Eoropeana amin'ny fananganana toerana fakana angovo avy amin'ny rano tamin'ny taona 2017, no nahatsikaritra fa tany amin'ny toerana voaaro na saropady ara-tontolo iainana avokoa no nananganana azy ireny. Hitan-dry zareo fa niteraka fahamainan'ny lalandrano sy nanome fahasahiranana ireo tanàna amin'ny fahazoana rano ny ankamaroan'ireo toby ireo. Ny fitsidihana toby tao Makedonia Avaratra tamin'ny taona 2017 no nahitana fa nanapaka ny fifindramonin'ny trondro sy ireo hazandrano sy voary hafa ireo fako navelan'ny fananganana tao amin'ny lalan'ny rano. Hoy ny fanadihadiana:
Maika ny fampitomboana ny fanaraha-maso ny fiantraikany sy ny fepetra famerenana amin'ny laoniny [ny tontolo iainana] any amin'ireo toby rehetra notsidihana. Amin'ny ankamaroany dia miharihary ny fanitsakitsahana ny lalàm-pirenena sy ny fenitry ny andry ara-pitantanambola iraisampirenena.
Tamin'ny fanambaràna iray ho an'ny Global Voices, naneho ny ahiahiny amin'ilay fironana ny biolojista makedoniana Ana Colovic Lesoska, avy amin'ny FTMF ao an-toerana Eko-svest :
Tsy manantsanda ny vatandrano rehetra ho antsika. Ny fiangànan'ny renirano dia tsy miankina fotsiny amin'ny fiangànan'ny rafi-boary izay andalovany fa amin'ny fiangànan'ny mponina izay miankina amin'ireo koa hahazoana sakafo sy rano. Ny fandravana ny renirano dia midika famotehana mangina ny tanàna sy izay fanorenana rehetra miaraka amin'ny tarazony sy ny tantarany.
Vao nahazo ny lokan'ny tontolo iainana Goldman  noho ny ezaka nataony hampitsaharana ireo tohodrano goavana teo andalam-panorenana tao amin'ny Valam-Pirenena Mavrovo, akanin'ny Lynx Balkan  mihitsy i Colovic.
Nahita ihany koa ny tatitra nataon'ny Bankwatch  fa, manerana ny faritra, ireo orinasa nahazo ny toerana hananganana sy hiasa amin'ireo toby kely hahazoana angovon-drano ireo dia na an'ny politisiana eo amin'ny fahefana na an'ny havany. Hoy ny tatitra:
Farafahakeliny toby kely 27 fakana angovo avy amin'ny rano no an'ny praiminisitra lefitra misahana ny raharahan-toekarena ao Makedonia Avaratra, ary manana toeram-pitrandrahana dimy koa farafahakeliny ny filohan'ny antoko mpanohitra Hristijan Mickoski. Ao Serbia, ireo orinasa manana fifandraisana amin'i Nikola Petrović, olona akaiky ny filoha Aleksandar Vučić no tena mahazo fanohanana betsaka amin'ny fananganana angovo avy amin'ny rano.
Tao Makedonia Avaratra, nandresy ara-pitsarana  ny mponina ao an-tanànan'i Zhirovnica, izay nampian'ny fiarahamonim-pirenena, tamin'ity taona ity ho fanoherana ny fananganana toby fahazoana angovo roa tao amin'ny monisipaliten'i Mavrovo. Najanon'ny manampahefana ao an-toerana ny fananganana azy ireo taorian'ny fehinkevitra fa tsy nanaraka ny fitsipika iraisampirenena sy tao amin'ny firenena ireo.
Tao Kosovo eo akaiky eo, nampiray ireo Serba sy Albaney tao amin'ny monisipaliten'i Štrpce, tao an-tendrombohitra Šar manakaiky ny sisintany Makedoniana ny hetsi-panoherana fananganana tobin'angovo avy amin'ny rano. nanomana andiam-panoherana tao amin'ny toeram-panorenana ry zareo hatramin'ny tapaky ny taona 2018. Tamin'ny 8 Oktobra, nisedra herisetra tafahoatra avy amin'ny polisy nasionaly , izay nampiasa tsifotra poavra tamin'ny mpanatrika, ka anisan'izany ny ankizy , ary niteraka faharatran'olona 20 ny iray amin'ireny hetsi-panoherana ireny. Nosamborina ny telo tamin'ny mponina tao an-tanànakely Biti Ambany teo akaiky ary navotsotra rehefa avy natao famotorana.
Hetsika fanoherana ny MHPP tao Strpce: nanatsahatra ny fanorenana tao amin'ny ampahan-tany an'olontsotra ny Vondrona Matkos.
Nahasarika ny fifantohan'ny fampitam-baovao ao amin'ny faritra ny fampiraisana ny hantsana ara-poko ao amin'ny firenena iray ravan'ny fanadiovana ara-poko vao roapolo taona lasa monja izay. Misy lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny Aogositra 2019 nitondra ny lohateny hoe “Štrpce: Avy amin'ny foko Serba iray sy avy amin'ny foko Albaney iray nosamborina noho ny fandoroana bulldozers.”  Nisy tantara mitovy amin'izany ihany koa nivoaka tao amin'ny BBC amin'ny teny Serba .
Saika avy amin'ny arina ny ankamaroan'ny angovo any Balkana Andrefana. Tamin'ny taona 2018, 3,8 isanjato  monja amin'ny herinjiro ao amin'ny faritra no avy amin'ny angovo nateraky ny tohodrano. Azo trandrahana tsara ao amin'ireo firenena rehetra (voatonona etsy ambony) ireo ny angovo avy amin'ny masoandro  saingy iray isanjato amin'izay zakan'ny faritra ihany no voapetraka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/07/144564/
 Tambajotra Emeraody: https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_network
 2700 ireo toerana bitika famokarana angovo avy amin'ny rano: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyj77D2KXlAhUIXsAKHZYFA1kQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fbalkanrivers.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHydropower%2520dams%2520in%2520the%2520Balkan230915_FINAL_EdUS.pdf&usg=AOvVaw30Dq8A498PNXRFTtKC_Wwi
 Fifanarahan'ny Vondrom-Piarahamonina ara-Angovo: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Community
 Vao nahazo ny lokan'ny tontolo iainana Goldman: https://www.goldmanprize.org/recipient/ana-colovic-lesoska/
 Lynx Balkan: https://globalvoices.org/2018/02/07/deki-the-balkan-lynx-is-all-grown-up-photos-show-but-his-species-remains-in-trouble/
 nandresy ara-pitsarana: https://meta.mk/en/the-government-proscribes-the-zhirovnica-3-hydro-power-plant-the-citizens-say-they-will-not-allow-the-construction-of-the-other-two/
 herisetra tafahoatra avy amin'ny polisy nasionaly: https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-50063845
 “Štrpce: Avy amin'ny foko Serba iray sy avy amin'ny foko Albaney iray nosamborina noho ny fandoroana bulldozers.”: https://www.info-ks.net/vijesti/kosovo/103242/strpce-uhapseni-srbin-i-albanac-pod-sumnjom-za-paljenje-bagera
 angovo avy amin'ny masoandro: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/IRENA_Cost-competitive_power_potential_SEE_2017.pdf